Igumbi elinye - I-Airbnb
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguKiki
UKiki ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uKiki iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
igumbi elipholileyo kwi-B&B enamagumbi ama-5. Embindini wegumbi lokuhlala elinesihlomelo ekhitshini. I-B&B isembindini weDelft, iHague, iWestland kunye neRotterdam. Kumashishini kunye neendwendwe zokuzonwabisa. Indawo ezolileyo ifikeleleka ngokulula ngemoto yokupaka simahla.
Eli gumbi likumgangatho wesibini (nceda uqaphele ukuba asinayo ilifti). Eli lelona gumbi lethu lincinci kwaye lingaphantsi ngokufanelekileyo ukuhlala iintsuku ezininzi kubantu be-2 okanye kunye nemithwalo eninzi.
. ibhedi ephindwe kabini 1.40 x 2.00 m,
. isinki, indlu yangasese, kunye neshawari,
. umabonwakude kunye neWiFi,
. indawo yokusebenzela enezitulo
. into yokufaka umoya endlini
Eli gumbi likumgangatho wesibini (nceda uqaphele ukuba asinayo ilifti). Eli lelona gumbi lethu lincinci kwaye ling…
Umbuki zindwendwe ngu- Kiki
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Maasland